दम्पतीको झ’गडा युटुबमा हालेका सन्तोष देउजाले पाए स’फाइ - Nepali in Australia
दम्पतीको झ’गडा युटुबमा हालेका सन्तोष देउजाले पाए स’फाइ
August 25, 2021 autherLeaveaComment on दम्पतीको झ’गडा युटुबमा हालेका सन्तोष देउजाले पाए स’फाइ
काठमान्डौ- साइबर अ’परा’ध मु’द्दामा पत्रकार सन्तोष देउजाले स’फाइ पाएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले सा’इबर अ’पराध मु’द्दामा उनलाई मंगलबार स’फाइ दिएको हो ।
न्यायाधीश उपेन्द्रप्रसाद गौतमको एकल इज’लासले आफूलाई नि’र्दोष ठ’हर गर्दै सफाइ दिएको देउजाले जानकारी दिए । देउजाको तर्फबाट अधिवक्ता स्वागत नेपालले ब’हस गरेका थिए ।देउजा क’पुरबोट मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित क’पुरबोट युट्युब च्यानलका प्रबन्ध निर्देशक समेत हुन् ।
देउजाले डा. नीलमकुमारी साह र डा. राजेशकुमार साह दम्पतीको झ’गडाको विषयमा युट्युब च्यानलमा अन्तर्वार्ता प्रसारण गरेका थिए ।अन्तर्वार्ताको विषयमा अ’सन्तुष्टि जनाउँदै डा. नीलम र उनका बुवा निरञ्जनप्रसाद साहले देउजाविरुद्ध मु’द्दा दायर गरेका थिए ।
हि’रासत नबसी लु’केर बसेका देउजाले २०७६ कात्तिक १४ गते अदालत पुगेर २५ हजार रुपैयाँ ध’रौटी बु’झाएका थिए ।स’फाई पछी उनले लेखेका छन् -”सत्य कै जीत”३ वर्ष पहिले लाग्नै नपर्ने मु’द्धा(बि’धुतीय कारोबार ऐन) लाग्यो। यो अवधीमा मलाई सहित परिवारमा कति त’नाव भयो व्यक्त गर्न सक्दिन।
से’डुअ’लको काममा कति असर पर्न गयो व्या’ख्या गरि नसक्नु थियो। २९ दिन भु’मीगत हुदाँ अधिवक्ता आदरणीय दाजु स्वागत नेपालले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा हा’जिर गराए यता कहिल्यै साथ छो’ड्नु भएन। आफ्ना महत्वपुर्ण कामै छाडेर निशुल्क व’कालत मात्रै गरिदिनुभएन अ’भिभावकत्व समेत ग्रहण गर्नुभयो।
फलस्वरुप आज मैले न्या’याधीश उपेन्द्र प्रसाद गेोतम ज्युको ई’जलासबाट स’फाई पाएको छु। श्रीमानलाई धन्यवाद। यो बिचमा म भु’मीगत हुदा आर्थिक स’हायता गर्ने फ्रि’ड’म फो’रम, का’नुनी स’हायता गर्ने अधिवक्ता पुर्ण चिमरिया, महेश नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ बारा, प्रेस संगठन नेपाल, ब्रो’डकाष्टिङ्ग एशोसियशन अफ नेपाल(वान) लगायत मेरा सम्पुर्ण शुभचिन्तकहरुलाई हा’र्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।
युरोपकै टप युवा इन्भेस्टरको सूचीमा गोर्खाकी बेलिन्डा गुरुङ